मर्निङ वाकको बहानामा यौ’न लीला मञ्चाउने नेपाली युवायुवती पक्राउ |
October 1, 2021 adminLeaveaComment on मर्निङ वाकको बहानामा यौ’न लीला मञ्चाउने नेपाली युवायुवती पक्राउ
बिहानै देह सुख! मानिसको चाहनाको कुनै सीमा छैन। हिजोआज मर्निङवाकमा जानेहरू साथीसहित होटलका कोठामा जाने गरेका छन्। दिउँसो र बेलुका होटलमा छापा मार्ने चलन बाक्लो भएपछि जोडाजोडीले अवैध शारीरिक सम्बन्धका लागि बिहानको समय चुनेका हुन्। ‘कोठा खोज्नुभाको हो सर? कति घण्टालाई हो?’ सोमवार बिहान सुन्धाराको एक होटलका बोर्डमा आँखा डुलाउँदै गर्दा एकजना किशोरले पछाडिबाट साउती गरे। ‘केटी पाइन्छ भाइ?’ हामीले आफ्नो रिपोर्टिङको ध्येय अनुसार प्रश्न गर्‍यौँ। ‘त्यो त साहुजीलाई सोध्नुपर्छ,’ ती किशोर खुर्रर कुदेर होटलतिर लागे। एकछिनमा आएर भने, ‘तपाईंले नै केटी बोलाउनुभएको छैन?’ छैन भन्ने संकेतले टाउको हल्लाएपछि उनी निराश हुँदै धरहरातिरबाट आइरहेको ट्याक्सीभित्र हेर्न थाले।
देशभरका कर्मचारीलाई १० दिने सार्वजनिक विदा?
काठमाडौंमा आफ्नै घर भएकी ३२ वर्षीया डिभोर्स महिलालाई बिहेको लागी जीबनसाथी चाहियो(सम्पर्क नम्बरसहित)
लामो दुरीको सवारी संचालन सम्बन्धमा आयो नसोचेको निर्णय।
नेपालमा टिकटक प्रयोग गर्ने हरुका लागी दुखद खबर,भारतमा जस्तै नेपालमा प्रतिबन्ध हुन सक्ने,कारण यस्तो